Manjaro 20.2.1 inosvika naPamac 10 uye idzi dzimwe nhau | Linux Vakapindwa muropa
Semunhu anoshandisa Manjaro, kunyanya mushanduro yayo ye USB (uye ARM), ndanga ndakamirira iyi nhau kwemazuva. Musi waZvita 30th vakaburitsa yakagadziriswa, izvo zvinoreva kuti vakagadzirisa akawanda mapakeji evashandisi varipo, saka yaive nyaya yemazuva vasati vatitaurira nezve kuburitswa kutsva. Iyo nguva yatosvika, uye kwenguva pfupi ikozvino tinogona kurodha pasi Manjaro 20.2.1, Nibia yekutanga poindi yekuvandudza.
Parizvino, iyo kuvhura kuri pamutemo, asi hafu chete. Iri pamutemo nekuti iyo account yeTwitter account yakatoburitsa, asi haisi 100% nekuti havasati vawedzera ruzivo kana ku foramu yako uye hazvioneke pane webhusaiti yepamutemo. Nechikonzero ichocho, iyo rondedzero yenhau haisati yaburitswa parizvino, asi isu tinoziva kuti inosanganisira izvo zvinoratidzwa mumusoro wemufananidzo.
Manjaro 20.2.1 inoshandisa Linux 5.9
Sezvo ini ndichinyora ino chinyorwa ini handikwanise kurega kutarisa kumaforamu uye webhusaiti yepamutemo kuitira kuti vazvigadzirise uye ndinogona kuwedzera rumwe ruzivo. Panguva ino, isu tinoziva ndiani anoshandisa Linux 5.9, kunyangwe Linux 5.10.2 yatove kuwanikwa kubva kunyorera yakagadzirirwa kugadzirisa kernel. Vakagadzirisa zvakare Pamac kusvika v10, pamwe nedzimwe shanduko idzo dzisiri munhu wese dzaifarira zvakafanana asi idzo chirongwa chakaedza kuodha zvese zvishoma.
Kune rimwe divi, shanduro dzepurojekiti dzakasvika (kana kuenderera) nenzvimbo dzakajeka Xfce 4.14, GNOME 3.38.2 uye Plasma 5.20.2, kunyangwe ini ndichifunga kuti yekupedzisira ichagadziriswa kune nyowani vhezheni munguva pfupi. Manjaro 20.2.1 inouyawo nemamwe akawanda akavandudzwa mapakeji, akadai seFirefox 84 kana LibreOffice 7.0.4, chero bedzi isu tichishandisa iyo "Nyowani" chiteshi vhezheni.
Manjaro 20.2.1 ikozvino yave kuwanikwa kubva kune anotevera ma link Xfce, GNOME y KDE. Munguva pfupi ivo vachaburitsa rwakadzama ruzivo mune yavo rusvingo rwemashoko uye pane yako foramu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 20.2.1 inosvika nePamac 10 uye idzi zvimwe zvinyorwa